Momba anay - Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd.
Milina fametahana tariby karazana milina feno vita
Tube & Sheet Fiber Laser Cut Machine
Fanakalozam-bika vita amin'ny milina fanoherana Fandroana Laser
Masinina cnc fanapahana cnc
Gantry karazana cnc milina fanapaka
Gantry masinina cnc milina fanendahana
Gantry tsipika mahitsy mirehitra cnc milina fanapaka
Fahazoana ny orinasa
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. Ny orinasa dia mifandray amin'ny Shandong Jubangyuan Machinery Group.Spesina manokana amin'ny milina fanoratanam-bokatra CNC, milina fanodinana ny CNC, fitaovana famafazana laser, fitaovana fanodinana, rafitra CNC ary singa miasa ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary ny serivisyNy orinasa vondrona dia orinasa teknolojia avo lenta manana traikefa fanamboarana mekanika 24 taona. Manana ekipa R&D matihanina ary nahazo patina 25 nahazo alalana.
Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitaon'ny IS09001. Araka ny fitakian'ny rafi-pitantanana ny tontolo iainana IS014001, dia mifehy tanteraka ny lafiny rehetra amin'ny akora, fanodinana, milina ary ny fandefasana mba hahazoana antoka ny fampandehanana sy ny kalitaon'ny vokatra .Ireo vokatra vokarina dia voamarina.
Buluoer Intelligent dia manana varotra feno sy varotra aorinan'ny varotra ao amin'ny indostria, ary nanangana sampana serivisy ho an'ny indostria manokana hanome ny famakafakana ny fizotrany sy ny fanapahana laser feno, ny fanapahana ny lelafo plasma, ny vahaolana fangatahana mandeha ho azy ary ny fanaingoana tsy mahazatra ho an'ny mpanjifa samihafa.
Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. dia manampahaizana manokana amin'ny fitaovana fanapahana laser, fitaovana fanapahana plastika, fantsom-by vy miampita ny milina fanapahana tariby, fitaovana fanamafisam-peo, rafitra CNC ary ireo singa ilaina amin'ny R&D, ny famolavolana, ny fanamboarana, ny varotra ary ny serivisy. Izy no mpitarika ny toekarena ao Shina Masinina fanapahana CNC. Orinasa "specialty sy fanavaozana" any Jinan.
Ny vokatra an'ny orinasa dia manana zon'ny fananana ara-tsaina mahaleo tena, patanty ara-teknika sy zon'ny mpamorona rindrambaiko. Ireo vokatra dia efa nandalo ny fanamarinana kalitao ISO 9001 ary amidy am-pitiavana na any an-trano izany na any ivelany. Izy ireo dia hoderain'ny mpampiasa an-trano sy vahiny noho ny vokatra ara-toekarena sy azo tanterahina, azo tanterahina sy azo ianteherana. Ny orinasa dia hanome anao ny vahaolana fanaraha-maso ny tarehimarika azo fehezina mifototra amin'ny toe-tsaina mampihatra sy mampihomehy momba ny fitondran-tena. Mamorona ny famirapiratana miaraka.
Masinina fitetezana fanaraha-maso ny tarehimarika naseho ao amin'ny Internet
Masinina fanidiana fanaraha-maso isa plasma plastika Gantry
Masinina fanapahana cnc integrated ho an'ny takelaka Tube Gantry
CNC Machine manapaka ho an'ny Gantry slab
Hiezaka hanampy anao izahay hanome ny vahaolana tsara indrindra ho anao.
Masinina fanoratana laser an'ny co2
Adiresy:No. 666 Fengnian Av., Faritra ara-toekarena Mingshui, Distrikan'i Zhangqiu, Jinan City, Shandong, Sina